Tolotra: ny tahan'ny Yoigo tsy manam-petra miaraka amin'ny Huawei Y7 2018 maimaim-poana | Androidsis
Raiso maimaimpoana ny Huawei Y7 2018 miaraka amin'ny taha Yoigo's Endless
Eder Ferreño | | About us, Mpikirakira telefaona
Yoigo dia mpandraharaha iray izay nanjary fantatra tamin'ny taha ambany sy avo lenta. Ny iray amin'ireo taha malaza indrindra amin'ny katalaoginy dia ny SinFín. Matetika, io taha io dia miaraka amin'ny fampiroboroboana izay ahafahantsika mitondra telefaona miaraka aminy. Ity no tranga amin'ity indray mitoraka ity, izay ahafahantsika mahazo ny Huawei Y7 (2018) miaraka aminy.
Izy io dia iray amin'ireo telefaona farany natolotr'i Huawei. Ka ity Huawei Y7 (2018) ity dia maodely tena ankehitriny sy feno, ary izany Azonao atao ny mandray azy maimaim-poana amin'ity taha SinFín de Yoigo ity. Vonona ny hahalala bebe kokoa momba ity fampiroboroboana ity?
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny famaritana ny fitaovana ianao dia azonao atao ny mamaky azy rehetra ity rohy. Manaraka izany dia hiresaka aminao voalohany momba an'ity fampiroboroboana ity izay misy ny iray amin'ireo sarany malaza indrindra amin'ny mpandraharaha, ankehitriny azo alaina miaraka amin'ity finday Huawei ity maimaimpoana.
1 Tahan'ny tsy misy farany an'i Yoigo
2 Ny tahan'ny Yoigo tsy misy farany amin'ny Huawei Y7 (2018)
3 Ahoana ny fomba hanaovana fifanekena amin'ity fampiroboroboana ity
Tahan'ny tsy misy farany an'i Yoigo
Izy io dia tahan'ny fantatry ny mpampiasa, ary iray amin'ireo mpandraharaha feno indrindra. antsika manolotra tahiry finday 25 GB isam-bolana, vola be izay hanome antsika ny fahafaha-mivezivezy amin'ny fahalalahana tanteraka mandritra ny volana. Tsy mila miahiahy momba izany isika amin'ny fotoana rehetra. Mety raha mpampiasa ianao izay mila mijery matetika mandritra ny volana.
Ankoatra izany, ny tahan'ny Yoigo koa dia manome antso tsy voafetra ho antsika. Lafiny iray hafa manome fahalalahana betsaka ary mahazo aina tokoa. Raha tsy maintsy manao antso maro isika dia tsy ho olana velively izany satria nampiditra azy ireo tao amin'ny salanisa izahay.
Azo antoka fa maro aminareo no efa mahalala, fa rehefa mampiasa Yoigo ianao dia tsy hanana olana amin'ny fandrakofana amin'ny fotoana rehetra. Satria mampiasa ny tambajotrany manokana manerana ny firenena ny mpandraharaha. Saingy raha misy ny olana na amin'ny faritra misy fidirana ratsy kokoa, ampiasao ny tambajotra Movistar sy Orange. Midika izany fa hanana famantarana sy fidirana Internet ianao na aiza na aiza misy anao.
Ny tahan'ny Yoigo tsy misy farany amin'ny Huawei Y7 (2018)
Ny fanontaniana lehibe ananan'ny maro aminareo amin'izao fotoana izao dia ny vidin'ity taha ity. 25,60 euro isam-bolana ny vidiny mandritra ny enim-bolana voalohany amin'ny fampiroboroboana. Raha vao mandalo ity fotoana ity dia manana vidiny 32 euro isam-bolana. Ity ny vidin'ny Yoigo's Endless Rate.
satria tsy mila mandoa na inona na inona ianao amin'ity Huawei Y7 (2018) ity. Tonga maimaim-poana ny telefaona miaraka amin'ny taha, izay mitahiry vola be, satria 200 € eo ho eo ny vidin'ny fitaovana eo an-tsena. Ka tsy hozakainao amin'ny fotoana rehetra io vidiny io.
Manana fijanonana roa taona (24 volana) isika miaraka amin'ity taha ity. Ity dia tahan'ny mety indrindra ho an'ny mpampiasa te hanavao ny findainy ary mirona miloka amin'ny fitaovana ao afovoany izy ireo. Mahazo telefaona tena feno ianao, araka ny hitanao tamin'ny mombamomba azy, sy ny tahan'ny mifanaraka amin'ny zavatra ilainao rehetra (angona maro sy antso tsy voafetra). Ary tsy mandoa vola amin'ny telefaona.
Ary koa, tsy maninona izay mpandraharaha misy anao izao, hahafahanao manao portability tsy misy olana. Raha irinao dia azonao atao ny mitazona ny nomeraonao na afaka miloka amin'ny isa vaovao miaraka amin'i Yoigo ianao. Safidio izay mifanaraka aminao indrindra.
Ahoana ny fomba hanaovana fifanekena amin'ity fampiroboroboana ity
Raha liana amin'ity fampiroboroboana Yoigo + Huawei Y7 (2018) maimaimpoana maimaimpoana ity ianao, dia mila mankany rohy manaraka. Ao no ahitanao ny fampahalalana rehetra momba ny taha, ny fepetra sy ny dingana ahafahana manao fifanarahana aminy. Noho izany dia mila manaraka fotsiny ireo dingana voalaza etsy ianao. Afaka minitra vitsy dia efa anananao io taha io.
Araka ny ahitanao azy dia tsotra dia tsotra ary noho izany dia mahazo fampiroboroboana lehibe ianao. Aza avela handositra izy!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Mpikirakira telefaona » Raiso maimaimpoana ny Huawei Y7 2018 miaraka amin'ny taha Yoigo's Endless
ARK: Famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana: fivoarana sa famerenana amin'ny laoniny?
Ny lalao golf tsara indrindra ho an'ny Android